Goobka North Rainier Landbanked Survey
Goobka North Rainier Landbanked
Xog Uruurinta "MARADA BULSHADA"
Seattle Parks and Recreation waxay wadaan qorshaha ay ku samaynayaan nashqada cusub ee beerta nasasho oo ku taala S Charlestown St inta u dhaxaysa 34th Ave S iyo 35th Ave S. Ka qayb gal oo naga caawi qaabaynta beerta nasashada xaafadaada. Waxa aanu uruurinaynaa nashqada marooyinka iyo dharka oo matalaya dhaqamada iyo caadooyinka kala duwan ee xaafadeena. Waxa aad jihayn kartaa barnaamijka farshaxanka beerta nasashada: Marada Bulsahda.
* 1. Aagee caalamka ayaa matalaya dhaqankaaga?
* 2. Waa maxay tusaalaha nooca marada ama dharka nashqadoodu la xidhiidhaan aaga aad ku sheegto dhaqankaagu caalamka?
* 3. Dharka soo socda kuwee ah kuwa muujinaya dhaqankaaga? Waxa aad samaysaa inta aad doonto.
a. Dharka marada ah
b. Salada bacda ka samaysan, saliga ama weelka
c. Roog ama ruumi
d. Dun la toley, ama xadhig
e. Kab ama tolme
f. Tolme farshaxan
* 4. Miyaad haysaa fikir marooyin oo sawir ama waxa aad haysato ah? Hadii aad hayso, fadlan waxa aad noo sheegtaa qaabka aanu kuula soo xidhiidhi karno (su'aasha xigta) si aanu kaagala hadalno isticmaalka nashqada ee farshaxanka beerta oo waxa aad sidoo kale noosoo gelin kartaa sawirka.
Miyaad haysaa fikir marooyin oo sawir ama waxa aad haysato ah? Hadii aad hayso, fadlan waxa aad noo sheegtaa qaabka aanu kuula soo xidhiidhi karno (su'aasha xigta) si aanu kaagala hadalno isticmaalka nashqada ee farshaxanka beerta oo waxa aad sidoo kale noosoo gelin kartaa sawirka.
* 5. Waxa aad noo sheegtaa cinwaanka iimeelka ee aanu kaala soo xidhiidhi karno hadii aad soo gudbisay ama aad doonayso inaad talo naga siiso marada cusub ee aad soo gudbisay. (dhamaan jawaabaha iimeelka ah (ama lambarka taleefanka) waxaa la gelin doonaa bakhtiyaa nasiibka kaadhka hadyada Safeway)
* 6. Muunada halkan lagu soo bandhigay, guji marada/muunada adiga ku matala ama sharaxaya waxa uu kaaga dhigan yahay (su'aasha xigta). Waxa aad samaysaa inta aad doonto.
* 7. Sharaxa waxa muunada marada ah uu adiga kaaga dhigan yahay (ikhtiyaar)